ईश्वर बरालसँगका क्षणहरू | मझेरी डट कम
बराल र मबीच धेरैजसो हिन्दीमै कुरा हुन्थ्यो। यस्ता केही व्यक्ति छन्, जोसँग हिन्दीमै कुरा हुन्छ। धच गोतामे एकेडेमीको सदस्य-सचिव हुने सम्भावना बढेर गयो। तिनताक उपकुलपति हुन्थे। उनले अन्य सदस्यमा ध्यान दिए कि दिएनन् तर उपकुलपति आफूलाई मान्य हुनुपर्छ भन्ने उनको धारणा थियो। सोही अनुरूप, उनकै संस्मरण अनुसार बरालको ध्यान आएपछि उनले लेखेका छन्, उनको मनमा तिनताकको एउटा विज्ञापन आयो, 'यही है राइट च्वाइस बेवी।'
केही अनौपचारकि प्रसंगहरू पनि छन्। ईश्वर बराल अलि 'नियमबद्ध' जीवन बिताउने व्यक्ति थिए। आफैँले अनुभव गरेको त होइन, सुनेकोसम्म हुँ। उनलाई समय नलिएर झ्वाट्ट कक्षमा पसिदिने मानिस रुचिकर हुँदैन थिए। त्यस्तै एकपटक लन्च समयमा केही खाइरहेको अवस्थामा कोही बिनासूचना ढोका उघारेर पसिदियो। बरालको नियम र मनस्थितिविरुद्ध थियो त्यो। उनले ती महोदयलाई पछि आउनू भनेर तत्काल फर्काइदिए रे !
नियम, समय आदिलाई महत्त्व दिने बराल खानपिन गर्दा भने अत्यन्त रमाइला, सरल र तुलनात्मक रूपमा मुक्त पनि बन्थे। उनी अनेक पुराना र उपयोगी कुरा बताउँथे। भन्थे, "गौतमजी तपाईंलाई थाहा छ, लाजिम्पाट राणाकालमा अंग्रेजीको लज इम्पार्टबाट बनेको हो।"
"थाहा थिएन डाक्टर साहेब !" म भन्थेँ।
एकपटक मणीन्द्ररञ्जन बरालका घरमा एउटा सानो समारोहको आयोजन गरिएको थियो। नेपाली लेखक त थिए नै, हिन्दीका प्रसिद्ध समालोचक नामवर सिंहको उपस्थिति पनि थियो। उनकै सम्मानमा त्यो कार्यक्रम राखिएको थियो। त्यहाँ एउटा भाषिक बहस चलेको थियो। भाषिक हुनाले म पनि सहभागी थिएँ। त्यहाँ, सम्भवत: पहिलो र अन्तिमपटक ईश्वर बरालसँग मेरो मतान्तर भएको थियो। नामवर सिंहले भनेका पनि थिए, "आप ने भाषा विज्ञान का बहुत अध्ययन किया हुआ लगता है।"
त्यसपछि एकपटक नरेन्द्रराज प्रसाईंले आयोजन गरेको कविता निर्णायक समूह, जुन ईश्वर बरालको संयोजकत्वमा थियो, मा म पनि थिएँ, डा बरालसँग लामै बसिएको थियो। त्यस दिन बेलुकी एउटा संस्थामा डा बरालले प्रमुख आतिथ्य गर्दै अंग्रेजीमा मन्तव्य दिनुपर्ने थियो। कविताको निर्णयपछि खानपिन चल्न थाल्यो। पहिले त सबैले नाई भने। बरालले भने, "मलाई त त्यहाँ जानु छ।"
त्यसपछि 'मेडिकल डोज'सम्ममा सहमति भयो। 'मेडिकल डोज'पछि एक दुई थप नेपाली 'मेडिकल डोज'। त्यसपछि बराल मुडमा आएर घोषणा गरििदए, दागको एउटा शेरसहित :
त्यसो हुँदाहुँदै पनि डा बरालले प्रमुख आतिथ्य गरे। राम्रो अंग्रेजीमा बोले। मैले पनि बोलेँ। म पनि त आमन्त्रित थिएँ। जिज्ञासा राख्नुहोला, खानपिन के भयो त ? जुन संस्थामा गइएको थियो, संयोगले त्यहाँ पनि कार्यक्रमपछि 'मेडिकल डोज'हरूको व्यवस्था थियो त... त्यसपछि त बोल्नु पनि थिएन नि त सभामा !
बराल चाबहिलको मेरो घरमा घुम्दैघुम्दै एक दिन आइपुगे। मैले स्वागत गर्दै सोधेँ, "डाक्टर साहेब कैसे अचानक ?" कारण रहेछ, उनी त्यहीँ भाइको घरमा बसेका रहेछन् तिनताक। गल्लीपारि मेरो घर थियो, गल्लीवारि उनी बस्ने। भेटुँ भनेरै आएका थिए। भने, "बस् ! एक कप चाय पिने आया हुँ, चाय पिकर चला जाउँगा।"
"खग ही जाने," खग की भाषा अनुसार मैले भनेँ, "शाम हो चला है। थोडा सा चलेगा ?"
"देर हो जाएगी।"
"नहीँ, बिल्कुल नहीँ।"
बरालले भने, "बस् एक लुंगा।"
यसैगरी बराल आफैँलाई पनि आश्वस्त पार्थे। त्यसपछि दुनियाँभरकिो गफ सुन्न पाइयो डा ईश्वर बरालबाट। उपयोगी र रुचिकर पनि। त्यस साँझलाई रातमा ढालियो। नेपाली 'मेडिकल डोज' लिइयो। त्यसपछि उनी गए।
'नारकिेत समाकारा' पनि थिएनन् बराल। कारण, उनी सरलमा सरलतम थिए, बुझ्न सक्नुपर्थ्यो। हो, उनलाई आफ्नो दिनचर्यामा बिनासूचना हस्तक्षेप गरेको मन पर्दैन थियो। त्यसलाई त राम्रो भन्छु म।